Qalabka mindida oo leh walxo kaamil ah: caag abs, caag thermoplastic iyo walxaha heerka fasalka. Awood koronto oo leh 36W 0.38A, cabbirka cabbirka waa 290 * 227 * 340mm, miisaanka saafiga ah waa 3.1kg. Daryeel fudud - Nadiifinta fudud ee biyaha tuubada gacmaha. Mindida mindidaani waa habka ugu fiican ee loo afaysto mindiyo jikadaada isla markaana waqtigaaga loo ilaaliyo. All-in-One Set, 5 nooc oo mindi goos goos ah iyo garoocad baastada hal jeer ayaa jeermis lagu dilaa
Hilib kariyaha bariiska sokorta yar ku shaqeeya ee maraq bariis si otomaatig ah u shaqeynaya maraq bariis ah oo sonkor hooseeya ayaa ku go'doomay dheriga bariiska ee sonkorta hooseeya si loo yareeyo sonkorta. Ka dhig sonkorta luminta inay u fududahay sida neefsashada, u shaqeyso oo miisaankaaga u dhimo oo si caadi ah u cun Dhereg sonkor leh, bariis aan sonkor lahayn oo sonkor ah, fudud oo lagu yareeyo burooyinka dhadhanka qufulan ee qaniinyadaan, jacayl!
Moodada iyo wax ku ool ah, fududahay in la qaado iyo isticmaalka. Caato ah oo is haysta, ma qaadanayso meel badan. Mashiinka wax lagu karsado isuguma qasmi doono miiskaaga shaqada. Ama, si fudud ugu kaydso khaanaddaada! Ka-hortagga kuleylka-kuleylka iyo ilaalinta kuleylka. Aluminium aluminium PTC kululeeyaha, ammaan badan. Kuleylka kuleylka ku wareegsan, si buuxda u kari cuntada. Cuntada Fasalka 304 Weelasha cuntada ayaa ku wanaagsan labadaba karinta iyo keydinta cuntada, awoodda 900ml.